Sidee inuu ka soo kabsado Lugood Library ka dib markii Hard Drive ku burburtay
> Resource > Lugood > Ladnaansho Hard Drive oo shil u Khasaaray Lugood Library
"Drive A adag burburtay on my PC jir ah oo i ma isticmaali kartaa mar dambe. Waxaan iibsaday PC cusub oo helay Lugood cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxaan uun u soo bixi ii ahaayeen heeso Markaan ku iibsaday on Lugood. Wixii songs aan karaan dhoofiyo ka CD aan jirin, laakiin aan iPod. Markii aan isku dayay in uu u hagaagsan songs (waxaa jira kumanaan) si Lugood, waxa uu sheegay in wax walba oo laga tirtirayaa. Ma jiraa inuu ka soo kabsado Lugood Library la iPod? walba oo soo jeedinaya? "
Drive adagyahay computer failure keeni karaan Lugood Library lumiyo. Waxana ay u badan, dadka isticmaala soo kaban karto, Lugood iibsaday alaabta, sida heesaha, barnaamijyadooda, iyo TV muujinaysaa. Si kastaba ha ahaatee, songs users laga keeno ka CD-yada, soo bixi internetka ama share by saaxiibo, waa mid aad u adag tahay inuu ka soo kabsado. Nasiib wanaag, haddii heesaha oo dhan, kuwaas oo ku xayiran yihiin mid ka mid ah aaladaha Apple, sida iPod, users weli soo kaban karto, Lugood Library ka dib markii Hard Drive ku burburtay.
Talaabooyinka sida inuu ka soo kabsado Lugood Library ka dib markii gaari ku adag burburtay
Ugu horeyn, fadlan hubi in aad ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey your computer iyo drive ay adag tahay si sax ah u shaqeeyo. Markaas raac tallaabooyinka hoose si aad kabsado Lugood Library.
Tallaabada 1. Dowload TunesGo
TunesGo (Windows) iyo MobileGo ee macruufka (Mac) hadda la heli karaa. Dooro version saxda ah ee computer. TunesGo (Windows) hadda taageertaa iPhone, iPad, iPod iyo taabashada socda ee macruufka 5/7/6 iyo noocyada kale ee iPod. Si aad u aragto in qalab tufaax aad waxaa taageera ama ma, fadlan riix halkan . TunesGo (Mac) taageertaa iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iwm socda ee macruufka 5/6/7. Badan oo ku saabsan Baro faahfaahinta casriga ah ee TunesGo (Mac) .
Tallaabada 2. Connect Apple qalabka kombiyuutarka
Ka dib markii ay ku rakibidda TunesGo on your computer, fadlan u ordaan oo xiriiriyaan qalab Apple kombiyuutarka. Halkan waxaan qaadan sida inuu ka soo kabsado Lugood Library ka iPod la Wondershare version TunesGo Windows sida tusaale. Ka dib markii isku xira iPod si guul leh computer, TunesGo ogaan doonaa oo muujiya iPod on furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 3. kabsado badiyay Lugood Library ka dib markii gaari ku adag burburtay
Dhinaca bidix ee suuqa ugu weyn, waxaad ka arki kartaa shay sida "Media" magacaabay. Waxa Guji si aad u aragto noocyada file oo dhan way ka hoosaysaa. By default, tab ugu horeysay oo ka mid ah daaqadaha cusub waa Music. Waxaa Click, aad arki doonaa heesaha oo dhan aad iPod. Si fudud riix "Smart dhoofinta in Lugood", ka dibna heesaha oo dhan ka baxsan Lugood yihiin guuriyeen in aad Lugood Library aan nuqul. Ama waxaad dooran kartaa heeso doonayay, oo guji "Dhoofinta in Lugood Library" ka "Dhoofinta in" liiska hoos-hoos.
Talo & Tricks:
Waxaad arki, sida ay u fududahay waa inuu ka soo kabsado lumay Lugood Library. Ha ka werwerin mar dambe shil gaari ku adag. Laakiin, waa in aad si aad iPhone, iPad, iPod ama u hagaagsan Lugood aad si joogto ah ay dhacdo lumiso Lugood Library aan gurmad.
Hel TunesGo in ay isku dayaan in ay soo kabsadaan shil gaari ku adag laga badiyay Lugood Library!